यौन सुख पूर्ण रुपमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ ? त्याग्नुस यि खानेकुरा - राष्ट्रखबर-Nepal's Popular Digital Newspaper
स्वास्थ्य यौन सुख पूर्ण रुपमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ ? त्याग्नुस यि खानेकुरा
January 31, 2018 rastrakhabar 0
यौनसुखको अभावमा कतिपय दम्पतीको सम्बन्ध विच्छेद समेत हुने गरेको घटना हाम्रो समाजमा छ । भनिन्छ नेपाली दम्पतीको कलह सिरक मुनीबाट सुरु हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने, यौन जीवन सुखमय नहुँदा दम्पतीबीच खटपट सुरु हुन्छ ।
यसले उनीहरुको सम्बन्धमा नराम्रो असर पार्ने मात्र होइन विच्छेद नै गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउने गर्छ । त्यसैले यौन सुख दम्पतीको लागि आपरिहार्य हुन्छ ।
तर यौन सुख कसरी लिने भन्ने बारेमा दम्पतीले पहल गर्दैनन् । भनिन्छ, यौन सुख प्राप्त नहुनुमा खानपानको पनि भूमिका हुन्छ । कतिपय खानेकुरा यस्ता हुन्छन्, जसले यौन उत्तेजना पैदा गर्दैन । त्यस्ता खानेकुरा त्याग्नुपर्छ ।
मदिरा सेवनले हाम्रो शरीरमा बन्ने प्राकृतिक ह्याप्पी हार्मोनमा कमि आउँछ र टेस्टोस्टेरोनको लेभल कम हुन्छ । यसले गर्दा यौन सम्पर्कमा वाधा पुग्छ । त्यसैले यौन सुखका लागि मदिरा पिउने बानी ठिक होइन ।
मदिरा मात्र होइन कफीले पनि यौन सुखमा बाधा पु(याउँछ । यसको अत्यधिक सेवनले शरीरको स्ट्रेस हार्मोन असन्तुलित हुन जान्छ, जसको फलस्वरुप तपाईंलाई तनाव हुन थाल्छ । त्यसैले आफ्नो यौन जीवन सुन्दर बनाउन चाहने हो भने कफीको सेवन कम गरौं ।
अहिले हामीलाई सजिलो, मिठो र छिटो खानेकुरा चाहिएको छ । त्यसैले फास्टफूडको तलमा परेका छौं । यसले जिब्रोको स्वाद त मेट्छ तर यौनको स्वाद मेट्दैन ।
बजारमा उपलब्ध बढिजसो डेरी उत्पादन, जस्तै चकलेट, ड्रिंक्स आदिm कृत्रिम दूधले बनेका हुन्छन् । यिनीहरुको अत्यधिक सेवनबाट प्रोगेस्टेरोन, इस्ट्रगेन, टेस्टोस्टेरोन आदि हार्मोनको सन्तुलन बिग्रिन्छ ।
जलजलाको उपचारार्थ सहयोग अभियान, गायिका एन्जिला सहितको सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने
प्रधानन्याधीशलै नै ज्यान मार्ने धम्कि दिएको भन्दै निवेदन दर्ता